युटुबमा हिट फिल्म, कलाकारलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityयुटुबमा हिट फिल्म, कलाकारलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’
युटुबमा हिट फिल्म, कलाकारलाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’
November 29, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Entertainment, Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – रानी भन्ने फिल्म हलमा सुपरफ्लप भएको हो । यो फिल्मले नेपालभरबाट १० लाख पनि शेयर कमाएन होला ।फिल्मको मुख्य हिरोइन थिइन्, मलिना जोशी । मलिना जोशीको करिअरका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो फिल्म हलमा नचल्दा उनलाई त ठूलो घाटा नै लाग्यो । तर, त्यो भन्दा पनि मुर्छित पर्नुपर्ने अवस्था निर्मातालाई आयो । निर्माता फिल्म नचलेर सडकमा आएको उदाहरण नेपालमा खुबै छ ।
तर, यो फिल्म युटुबमा रिलिज भएपछि सबैभन्दा ठूलो खुशी मलिनालाई नै मिल्यो । अझै नेपालको नम्बर १ ट्रेन्डिङमा आएपछि मलिनाले दर्शकलाई धन्यवाद दिन भ्याएकी थिइन् । युटुबमा १० लाख भ्यूज हुँदा पनि खुशी मनाएकी नै थिइन् । हलमा दर्शक तान्न नसक्ने फिल्म युटुबमा निशुल्क दर्शकले हेर्दा कलाकार खुशी हुनुपर्ने कारण के ? अझ नम्बर १ मा ल्याइदिनुभयो भन्दै धन्यवाद दिनुको अर्थ के ?
नेपालमा अहिले युटुबमा फिल्म आउन थालेर हलमा चल्न छाडेका छन् । युटुबको रिलिज चाडो हुँदा हलमा दर्शक नै छैनन् । तर, निशुल्क फिल्म हेरेका दर्शकलाई धन्यवाद दिएर कलाकारहरु आफ्नो स्टारडम बढेको महशुश गर्दैछन् ।
फिल्म कारखानाको हालत पनि उस्तै हो । यो फिल्म हलमा सुपरफ्लप भएको हो । तर, युटुबमा आएपछि यो फिल्म पनि नम्बर १ टे«न्डिङमा आयो । फिल्मले नम्बर १ को स्थान पाउँदा यसकी अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीको खुशीको त कुरै नगरौ । उनी पनि मलिना जस्तै दर्शकलाई धन्यवाद दिन लम्किइन् । तर, हलमा सिनेमा नचलेर निर्माताले लाखौ घाटा पाएको पीडा निर्मातासँग नै थियो ।
नेपाली फिल्म युटुबमा आउँदा खुशी मनाउने ठाउँ पनि छन् । जस्तो अहिले अभिनेता प्रदिप खड्काले प्रेमगीत २ हिट हुँदा खुशी मनाइरहेका छन् । किनकी, यो फिल्म हलमा पनि हिट भएको थियो । हलमा हिट भएर निर्मातालाई सुरक्षित राखेका प्रदिपले युटुबमा फिल्म हेर्न नपाएका दर्शकले हेर्दा खुशी मनाउनु स्वभाविक छ ।
फिल्म युटुबमा फटाफट आउँदा त्यसले भ्यूज त पाउने नै भयो । तर, यसले हलमा जाने प्रवृत्तीको विकास गर्दैन । कलाकारले युटुबको टे«ेन्डिङ भन्दा पनि हलमा दर्शक आउँदा खुशी मनाउन आवश्यक छ । दर्शकलाई हलसम्म तान्न आफूले गरेका कमजोरी छाड्ने र राम्रो बानीलाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।
हुनत, अहिले कलाकार सामाजिक संजालमा अभ्यस्त छन् । युटुबमा भ्यूज, युटुबमा लाइक र कमेन्ट, टिकटकमा भिडियो बनाएर प्रसिद्धी कमाउन पाउँदा कलाकार मख्ख छन् । तर, यसले हलको व्यापारलाई कुन कुनामा पु¥याएको छ भन्ने भेउ उनीहरुलाई नै छैन ।
नेपाली चलचित्रका कलाकार युटुबकै यी कुरामा रमाएका छन् । यसैले दर्शक पनि उनीहरुसँग हलमा भन्दा सामाजिक संजालमा नै रमाइरहेका छन् ।
युटुबमा भ्यूज आउँदा र फिल्म चल्दा खुशी हुनु स्वभाविक होला । तर, त्यो भन्दा पहिले हलमा नै दर्शकलाई टिकट काटेर हेर्ने वातावरण बनाउनतर्फ लाग्ने कि नलाग्ने ? कि हलमा सुपर डम्बा भएर युटुबमा हिट हुँदा आफू हिट भएको भ्रम पालेर बस्ने ?
फिल्म ‘मेला’को ‘परिचय पाउ’ करोड क्लबमा
चलचित्र बिकास बोर्ड सदस्यमा नरेन्द्र महर्जन र दयाराम दाहाल नियुक्त